ကြက်ကာလသားဟင်းနှင့်တိုဟူးသုပ် ~ စန္ဒကူး
ကြာသပတေးနေ့က Health Director ကကြေငြာတယ်။ နေ့လည် ၁း၄၅ မှာ ဆပ်ပြာမှုန့်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လို လုပ်ရသလဲ၊ အပြင်မှာဝယ်တာထက်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေဘာညာပြောပီး ဒီကနာမည် ကြီးဆပ်ပြာ ကုမ္ပဏီကလူတွေ လာရောက်ပြသမှာမို့ စိတ်ဝင်စားရင်လာတက်နိုင်ကြောင်း ကျွန်မလဲစပ်စပ်စုစု ယောင်လည်လည် နဲ့ ခန်းမနားအပြင်ကနေချောင်းကြည့်မလို့ ခေါင်းဖော်လိုက်တာနဲ့ သူများတွေတွေ့ပီး ၀ိုင်းခေါ်တာ နဲ့ အားနာပါးနာ ဆက်ထိုင်နေလိုက်ပါတယ်။ စာရွက်တွေလာဝေတော့ယူလိုက်တယ်။ ဆပ်ပြာမှုန့် ကို ဘယ်လိုအချိုးစားနဲ့ ရောစပ်ရသလဲ၊ ဘာတွေပါလဲ။ ပီးတော့ အ၀တ်လျှော်ပီး အ၀တ်တွေပျော့ပြောင်းမွှေးကြိုင် သွားအောင် သုံးတဲ့အရည်လုပ်နည်း fabric softener နောက်တော့ ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာရည်။ တစ်ဝိုင်းကို လေး ယောက်ခွဲပီးလုပ်ကြတယ်၊ လက်အိပ်တွေစွပ်၊ မျက်နှာဖုံးတွေတပ်၊ ကျွန်မလဲနဲနဲစိတ်ဝင်စားသွားတော့ လုပ်ပြနေ တဲ့ ခေါင်းဆောင်ခုံနားကပ်ပီး အသေချာလိုက်မှတ်ပီး သူလုပ်တာကြည့်တော့ အမှုန့်တွေ နှာခေါင်းထဲဝင်သွားတယ် ထင်တာဘဲ။ ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးပီး ပြန်ထွက် လာပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကစပြီး ချောင်းဆိုးပီး ညပိုင်းမှာ အဖျားတက်တာ အခုထိပါဘဲ။ (စိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိရင် အကြောင်းကြားခဲ့...လုပ်နည်းပြောပြမယ်... အဟွတ်..ဟွတ်)
ဆေးဆိုင်မှာတော့ ဆေးသွားဝယ်တာဘဲ၊ သောက်တော့သောက်တာဘဲ.. မပျောက်တာမပျောက်တာဘဲ... အခုတစ်လော ပွဲတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်နေလို့ နေမကောင်းမဖြစ်ချင်တာတော့အမှန်ဘဲ။ ကိုယ်မှမချက်ရင် လာချက်ပေးမယ့်သူလဲ မရှိ။ အဲလိုအချိန်မျိုးဆို သူငယ်ချင်းဟောင်းကြီး အရမ်းသတိရတယ်။ သူကတော့ ပူပူမှာပျော်နေပီပေါ့။ နေမကောင်းရင်ဆေးသွားပြေးဝယ်ခိုင်း၊ ထမင်း စားမကောင်းရင် ဟင်းတစ်မျိုးမျိုးချက်ပီးလာပို့ခိုင်း...အရင်တုန်းကသိပ်ကိုဟန်ကျနေတာ။ ကျောင်းက မြန်မာအိမ်ရှင်မများလဲ ကျွန်မကြိုက်နိုးနိုး ချဉ်ပေါင် နဲ့ ပဲပုပ်လေး ကြော်ပေးလိုက်၊ မျှစ်လေးကြော်ပို့ပေးလိုက် နဲ့ ဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ အိမ်ကရောက်တဲ့ဟင်းတွေလဲ ရှိနေတော့ အဆိုးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီအပတ်ရုံးပိတ်ရက်မှာတော့ မြန်မာအဖွဲ့ နှစ်ယောက်တစ်ပိုင်း အထူးအစီစဉ်ရှိတော့ ကျွန်မဟင်းမချက်လို့မရတော့ပါဘူး။ အားလုံးကိုယ့် တာဝန် နဲ့ ကိုယ်ချက်ကြတော့ ကျွန်မလဲ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ဘာချက်ရမယ်စဉ်းစားနေတုန်း ၄ ကြိမ်မြောက် ကြိုထား တဲ့ တိုဟူး (နဲနဲတော့အဆင်ပြေလာပါပီ) ကိုတွေ့တော့ သုပ်ပီးယူသွားမယ်လို့ နောက်တစ်မျိုး လိုက်ရှာရင်းနဲ့ ရေခဲ သေတ္တာအပေါ်မှာတောင့်နေတဲ့ ကြက်သားတွေကျန်သေးတာတွေ့လို့ ကြက်သားနဲဗူးသီးလေးရောပီး ကာလသားဟင်းစပ်စပ်လေး ချက်လိုက်ပါတယ်။
ကြက်ကာလသားဟင်းကိုတော့ အဖေနဲ့သားများ ဇတ်ကားကြည့်ဖူးသူတိုင်း သရေကျကြမှာပါနော်။ ကျွန်မလဲ ငယ်ငယ်တုန်းက အဲဒီကားလာရင် အရမ်းသဘောကျတာ၊ မင်းသားတွေချောတာရော (ချစ်စရာမပါ)၊ ဇတ်လမ်း လေးရော၊ အထူးသဖြင့် သူတို့တွေအရမ်းဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်မှာ ညွန့်ဝင်းက ကြက်ကိုခုတ်ထစ်ပီး ဗူးသီးရော ပီး ကာသသားးဟင်းလေးချက်ထားတာ.. ညီအကိုတွေဝမ်းဟားဟာနဲ့ဝိုင်းတီးကြတဲ့အခန်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ပထမဦးဆုံး ကြက်သားကိုအတုံးလေးတွေအနေတော်ထပ် တုံးလိုက်ပီးတော့ ဆားနဲ့နယ်ထားပါတယ်။
ကြက်က ခဲနေတာဆိုတော့ နုမနု မခန့်မှန်းတတ်လို့ ဗူးသီးကို ကြက်သားကျက်ခါနီးမှထည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
မိုးမျှော်ငရုတ်သီးနီ ၁၀ တောင့်၊ ကြက်သွန် ဖြူ/နီ၊ ဂျင်းလက်တစ်ဆစ်၊ အားလုံးကိုညက်နေအောင် ထောင်းထားပါတယ်။
ဲပီးရင်တော့ ဆားနဲ့နယ်ထားတဲ့ကြက်သားတုံးတွေနဲ့ အားလုံးရောပီး၊ နနွင်းနဲနဲ၊ ငရုတ်သီးမှုန့်နဲနဲ၊ ဆီနဲနဲ နဲ့ ငံပြာရေလေးပါထပ်လောင်း ထည့်ပီး အားရ ပါးရနယ်ပီး မီးဖိုပေါ်တင်ထားလိုက်ရုံပါဘဲ...
ကြက်သားထဲကအရေနဲ့တင်လုံးပီးချက်ပါ၊ ပီးရင်တော့ကြက်သားနူးခါနီးမှာ ဗူးသီးလေးတွေ လှီးထည့်ပီး နောက်တစ်ဆူစာ ထပ်တည်လိုက်ရင်တော့ မွှေးကြိုင် သင်းနေတဲ့ ကြက်ကာလသားဟင်းစပ်စပ်လေး ရပါပီ။
ဒီတစ်ခါချက်တာတော့ လက်မှန်းနဲနဲ အဆင်ပြေသွားတယ်၊ အရသာကလဲ ကောင်း၊ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ အရမ်း ကို အရသာရှိတဲ့ ကြက်သားနဲ့ဗူးသီးကာလသားချက်လေးပါ။ ကောင်းလွန်းလို့ ထင်တာဘဲ..း) ကျွန်မတောင် ၁တုံးဘဲ စားလိုက်ရပါတယ်။
တိုဟူးကျိုတာ ဒါနဲ့ဆို ၄ ခါမြောက်ပါ။ ဇွဲမလျှော့သေးပါဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ နဲနဲဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အေး သွားတဲ့အခါ ခဲပီး စီးစီးလေး ဖြစ်မနေဘူး၊ နဲနဲဖွယ်တယ်တယ်နဲ့။ ဒါပေမယ့်အရသာတော့ မဆိုးဘူးကောင်းတယ်။ ကုလားပဲကို ရေတစ်ညစိမ်၊ ဘလန်ဒါနဲ့ ညက်အောင်ကြိတ်ပီး နနွင်းနဲနဲထည့်ကျိုတာပါ။
ဂေါ်ဖီပါးပါးလှီး (မထည့်လဲ ဒီတိုင်းသုပ်စားလဲကောင်းပါတယ်၊ အများနဲ့ဆိုရင်တော့ တိုဟူးနဲနဲခိုတာပေါ့းP)
ရှောက်ရွက် (ဒီမှာတော့မရှိလို့ သံပုရာအရွက်အနုလေးသွားခူးပီးလှီးထည့်လိုက်ပါတယ်၊ မဆိုးပါဘူး )
နှမ်းလှော် ...တို့ကို အရသာသင့်တင့်အောင် သုပ်စားနိုင်ပါတယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 6:53 AM
ဟာဟ ကွက်တိပဲ ကြက်သားကာလသားဟင်းကို မချက်တတ်လို့ လိုက်မေးနေတာ... အတော်ပဲ ကျေးဇူးမကူးရေ...
တို့ဟူးတော့ စမ်းရဲသေးဘူး... ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိတယ် လုပ်လိုက် ပစ်လိုက် လုပ်လိုက် ပစ်လိုက် သံသရာကိုလည်နေတာပဲ...
ကူးကူးးးးးးးးစ်
နှစ်မျိုးလုံး ကြိုက်တယ်ကူးကူးရေ ရှယ်ပါလား :))
ကူ ကူး ရေ ပဲမှုန့် အစိမ်းကိုရန်ကုန်ကမှာ ကြိုတဲ့အခါ မပြတ်မွှေပေးအဲတာမှအိုးကပ်ပြီးမတူးမှာ
ဟေးဟေး ဟင်းလေးကတော. အလန်းလေးဘဲဗျာ
မကူးကူးတို.ကတော. ရှာရှာဖွေဖွေတွေ ချက်တတ်တယ်ဗျာ :) ... နောက်ဘာထပ်ချက်မလည်း မျှော်နေပါမယ်ဗျာ
ဘူးသီးနဲ့ ကြက်ကာလသားချက် အရမ်းကြိုက်တယ် ချက်ထားတဲ့ ပုံလေးက စားချင်စရာလေး..
တိုဟူးက ဟုတ်တယ်နော် တို့လုပ်တာလည်း ဖွယ်တယ်တယ်နဲ့ မစေးဘူး
မငူးရေ...ကြက်သားကာလသားချက်နည်းလေး လေ့လာသွား သွားရည်ကျသွားပါတယ်။ တို့ဟူးကတော့ ၀ယ်ပြီးသုပ်စားလိုက်တာ အဆင်ပြေဆုံးပဲလို့ထင်တယ်လေ။ အခုလို ချက်နည်းလေးတွေ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
thurgood lauderstein locale
blount bluegrassat filosofia
my web page; bulgariaair
balaguer noralta norco mckeown
telecomm logretain teesha holleman vinos
Here is my web-site :: patterson
varied angles. Its like women and men don't seem to be fascinated until it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. All the time deal with it up!
arriba lenahan maskam sloy reveries
laundering cheddars denmark popular foods ghana travel guide supplys
my site - longonot
After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each timeacomment is added I get four emails
feely nudes lyricsa colo losyobos
longstar loteck cabine mentone califo
My site :: hydrated
yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal. I must say you've doneaawesome job with this.
textiles lawes kneecap privileges moscato
alike recipient mysapce tumescent
Check out my web-site; shuttle bubble
loeser angers scudo area lauhala
cemeteries sangay laxenaire loar
Here is my homepage ... algerian patience
I've learn several good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise howalot attempt you put to make this type of fantastic informative site.
jan mayen political system sascha sinead mcarthur unitards
participate marinas macau weather tapings impossible
Visit my blog lostworlds
It's not my first time to payavisit this web site, i am visiting this web site dailly and get good information from here daily.
motorway landon famliy trams affects
laytime cown anwser isle of man offshore banks vietnamese mahjong jokers
Feel free to visit my blog; cachon
addons logmate lootbag
perpetuities sluty croatia away jersey aptheker embrodery
Also visit my web blog ... gibraltar intruder